ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Installer — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited April 2009 in File Request
MZ Member များခင်ဗျာ
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Installer လေးများပြုလုပ်ချင်ပါတယ်။ ပုံထဲကလိုမျိုးပါ။
ဘယ်ဆောဖ်၀ဲလ်သုံးရမယ် ဆိုတာလေး ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်။ အများကြီးကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ ကျနော်လိုမျိုး လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိသူလေးတွေ လည်းရှိကြမှာပါ။ အဖက်ဖက်မှ ထူးချွန်လှသော ၀ါရင့် ပညာရှင်များအားလုံးကို အားကိုးတကြီး အကူအညီတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
.net နဲ့ ရေးထားတာဆိုရင် Visual Studio မှာ ပါတဲ့ Setup Project နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် ...
Setup Factory နဲ့လုပ်ရင်လည်း လွယ်တယ်ပြောပါတယ် ... (မသုံးဖူးဘူး)
NSIS နဲ့ လုပ်လည်းရပါတယ် ... သူက Open Source ပါ .. NSIS Script ရေးတတ်ဖို့တော့လို ပါတယ် ... ကျွန်တော် တစ်ခါတော့ ရေးဖူးတယ် ... တတ်သလောက်တော့ ကူညီိနိုင်ပါတယ် ...
.net နဲ့ ရေးထားတာဆိုရင် Visual Studio မှာ ပါတဲ့ Setup Project နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် ... NSIS နဲ့ လုပ်လည်းရပါတယ် ... သူက Open Source ပါ .. NSIS Script ရေးတတ်ဖို့တော့လို ပါတယ် ... ကျွန်တော် တစ်ခါတော့ ရေးဖူးတယ် ... တတ်သလောက်တော့ ကူညီိနိုင်ပါတယ် ...
အခုလိုအကြံပေးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NSIS Script ရေးဖို့အတွက် အစက ပြန်စရပါလိမ့်မယ်။ အခြားလွယ်ကူတဲ့ Software (Drag & Drop) လောက်လွယ်တဲ့ဆော်ဖ်၀ဲလ်များ ရှိရင်လည်း ကူညီကြပါဦး:D:D:D။ အလွယ်လိုက်တယ်လို့မထင်စေချင်ပါ။ ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့ လမ်းနဲ့ အရမ်းေ၀းကွာနေလို့ပါ။:((
ဟုတ်ကဲ့ ... ဒါဆိုရင် Setup Factory ကိုပဲ သုံးလိုက်ပါ ... သူကလွယ်ပါတယ် ... Drag and Drop လောက်ပါပဲ ... Freeware မဟုတ်တော့ ... Cracked Version လေးတော့ ရှာရမယ်ထင်တယ် ... :39:
Install Shield ကို သုံးကြည့်ပါလားဗျ
Setup Factory v8.1.1006.0 ကို အောက်က links မှာ ဒေါင်း လိုက်ပါ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ပြောတဲ့လင့်ခ်မှာဒေါင်းလိုက်တာ အသည်းတထိတ်ထိတ်ရင်တဖိုဖိုပါပဲ။ သို့သော်ငြားလည်း Serial က တောင်းလည်းမတောင်းဘူး။ ဘယ်မှာထည့်ရမှန်းကိုမသိဘူးဗျ။ ကူညီပါဦးခင်ဗျာ။ ကူညီပြောကြားပေးသူ အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ။
အထက်က မိတ်ဆွေများ ပေးထားသော အကြံဉာဏ်များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ မကျွမ်းကျင်မှုများနဲ့ အလှမ်းေ၀မှုများကြောင့် အဆင်မပြေလှပါ။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးဆော်ဖ်၀ဲလ်လေးများ တွေ့ရှိခဲ့ရင်လည်း မျှကြပါလို့။ အကယ်လို့ Links ဖြစ်ဖြစ်ပေးကြပါ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
install shield တို့ setup factory တို့လည်းကောင်းပါတယ်။တစ်ချိုဟာတွေကနည်းနည်းရှုပ်တယ်..\_:D/\_:D/